“Kama fakarayo tartanka aan kula jiro Cristiano Ronaldo.” – Romelu Lukaku – Gool FM
(Milano) 01 Maarso 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa sheegay inuusan ka fekerin tartanka uu kula jiro xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo kaasoo ku aadan hanashada gooldhalinta horyaalka Talyaaniga.
Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa hoggaaminaya liiska gooldhalinta horyaalka talyaaniga isaga oo dhaliyay 19 gool, kaliya hal gool ayaa u dhaxeeya isaga iyo xiddiga reer Belguim ee Romelu Lukaku.
Romelu Lukaku ayaa bandhig fiican ku sameynaya kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkan, isaga oo gool dhaliyay kulamadii ugu dambeeyay ee Nerazzurri, wuxuuna gaaray goolkiisii 18-aad ee horyaalka.
Inkastoo si xoogan ay u tartamayaan isaga iyo Cristiano Ronaldo, haddana Lukaku ayaa muujiyay inuusan ku fikirin arintaas, balse uu diirada saaro kooxdiisa oo rajo ka qabta inay ku guuleysato horyaalka, maadaama farqiga u dhexeeya iyaga iyo kooxda booska labaad fadhisa ee AC Milan uu gaarayo ilaa iyo 4 dhibcood.
Romelu Lukaku ayaa u sheegay shabakada “Sky Sport”:
“Marwalba waxaan ka fikiraa inaan guuleysto, waxaana hada ku jiraa waqtigeygii ugu fiicnaa xirfadeyda.”
“Laakiin Inter Milan ayaa ah waxa kaliya ee haatan aan xiiseynayo, mana ka fikirayo wax kale.”
Waxaa xusid mudan in Juventus ay barbaro gashay kulankeedii ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay Hellas Verona, taasoo ka dhigeysa in farqiga u dhexeeya iyada iyo kooxda hoggaanka heysa ee Inter Milan uu gaarayo ilaa iyo 7 dhibcood.